Iingcebiso zokusetyenziswa kwikhibhodi ye-ipad - i-Geofumadas
Iingcebiso zokuqhelanisa nekhibhodi ebonakalayo ye-Ipad
NgoJulayi, 2011 Apple - Mac
Akukho nto ingcono Ikhibhodi yeZagg ukusebenza kwi-Ipad, eye ibonakele kakade njengendawo yokukhupha i-drop of one meter kwikhonkrithi. Kodwa ukuhamba akusilo lonke ubabalo, ngoko nantsi ezinye iingcebiso zokusetyenziswa kwiikhibhodi.
1. Akulungile ukuthatha imikhwa emibi.
Ukungahambi kakuhle kukuba awukwazi ukubona zonke izitshixo ngezandla zabo, kwaye awukwazi ukubona yonke into ebhaliweyo. Oku kuba isilingo kwakhona ukusebenzisa iminwe ezimbini ezifana amazimba ukutya chicken kwifama Granny Usulután.
Kodwa hayi, musa ukulibala ukuba ukuba sifuna ukusetyenziswa ngokufanelekileyo kufuneka usebenzise yonke iminwe yakho. Kanye izifundo typing yaba investment elungileyo, thatha i iPad kufuna imali practice ethile, sifanele bazi nantoni na phakathi kwiseshoni yomsebenzi kodwa akezi ukusuka kwizifundo ezimbi umva wokuchwetheza omdala.
Oo, ndive ndivakalelwa ngaloo nto UProfesa Esperanza bethetha ingoma efanayo ... FFF JJJ FFF JJJ ... ngelixa i-gorgoreo ibonakale njengefama enkulu kwaye idangalisa Plin owamemezela imfuneko yokwenza ukungena, kodwa oko kwasifundisa ukuba sivumelanise iillabble cut.
Ndingathanda ukubona enye inenekazi, ngokumomotheka okungabonakaliyo, ngoku kwithebhulethi ukubuyisela. Hehe
Kwakungenakulungeleka ukuba ufunde ukulungiswa ngokuzenzekelayo kopelo. Oku kubi njengoko kubhala ngaphandle kokugxininisa kwiLizwi uze wenze izilungiso kunye neqhosha lasekunene kwisicatshulwa esicatshulwa ebomvu; Ngaloo ndlela asiyi kuphinda siphucule isipeliso kwaye ngokukhawuleza okanye siza kuba neentloni.
Nangona ukusetshenziswa khangela upelo Ewe kuncedo kakhulu. Nangona lihle lihlwempuzekileyo, alikho ukhetho lokufaka umbhalo kwisichazamazwi.
Esi silungiselelo kwi-Ipad senziwe kwisicelo sesethingi, sikhethwa ngokubanzi kwaye ke ikhibhodi.
Kukho ulungelelwano uhlobo lwebhodibhodi, efanelekileyo kwimeko yethu QWERTY.
Iyakuthi ixhase ngokuzenzekelayo emva kwexesha okanye ukungena. Njengoko le ndlela yokusebenzisa indawo emva kokuba isithuba ezimbini kubonakala crazy ukuba kunokuba ube emfutshane kunokukhokelela nalo mkhwa mbi.
2. Ufanele uvumelanise nento ongenako.
Ngokuqinisekileyo, ubunzima obukhulu kukuba ukuqhuba nje isikrini, njengokuba kukho ikhibhodi yeklasi ayinakwenzeka. Ndenze isigqibo sokwenza ulungelelaniso olwenzele zona:
Ngelixa ndisebenza kwiiphelo ndibona ikhusi, iphelele kuloo nxalenye iminwe ifaka iifaki. Kwaye xa ndihamba edolophini ndiyibona kwakhona, kuba ukuhlukana kungenza ndibe nokulawula ukuba yonke into ihamba kakuhle.
Ukunyaniseka kuyinako, kodwa kukho ukukhohlisa. Ukuba olithathayo xa ucinezela iqhosha kuvela iinketho, kodwa xa wenziwe tsala up okuncinane ukuba kuyimfuneko, kugxininiswa olungagqibekanga.
Njengoko kumatshini wokubhala, iileta "a" kunzima kwaye ukwenza loo nto idonsa ngomunwe omncinci okhohlo ufuna ezinye izinto.
Kwakhona into ephazamisa ileta u ngokugqamisa, kuba kuyimfuneko yokwenza udonga ngakwesobunxele kuba ngakwesokudla kubonakala ngeemlauts.
Kodwa ekugqibeleni isebenza, kuthatha ukulungelelanisa kumanani apho kufuneka wenze khona kunye nelo qhosha elenza iimpawu. Ekugqibeleni iba luncedo kodwa nangona oku Aninakumkhonza iiklasi ukuchwetheza kufuneka kwakhona iminwe emibini, nokuba kweli web hlabathi iimpawu zocaphulo nje isetyenziswa rhoqo, parentheses, colons kunye pleca.
Yinto yokusebenza, ngokusetyenziswa kweemfuno kunye nokuzilibazisa ukufunda. Ngokomzekelo ukusetyenziswa kweetekisi ezinkulu (CAPS LOCK), oku kwenziwa ngokucindezela izitshixo zokutshintsha ngexesha elinye.
3. Izinto ezingenakuthenjwa
Mhlawumbi into enomsindo kukuba i-Apple yenzelwe i-Ipad ngesantya esilumkileyo esiphambeneyo njengetayile. Sele Ipad2 oku iphindiselwe moya, kodwa ubuncinane nale nguqulo yokuqala bengazimisele beka ifowni kwindawo othe tyaba uba yokuma esingaphathekiyo neminwe kwi keyboard kuba kufuneka edlala kunye twist engalindelekanga kwi yayo ithenda
Kule ndlela ayikho indlela yokuphuma, imisebenzi yokuthuka nje eyenza ukuba ujonge.
Kodwa mfutshane, into elungileyo yokwenza ukusetyenziswa kuyo, njengokuba senze ngekhibhodi yefowuni yeselula, oku akunakho ukubuyela emuva. Xa simelana noko, kuya kuba nzima ngakumbi.
Ukusebenzisa ikhibhodi ye-Ipad ngobuchule obukhulu akunakunqwenela ukuziqhayisa.
Post edlulileyo«Edlulileyo Ndivumelana kakhulu kunye uMlawuli
Post Next Iforam ye-Latin American Geospatial ForumOkulandelayo "